သင်္ကြန်ကာလ အတွက် ငပလီကမ်းခြေရှိ ဟိုတယ်များ သာမက မြို့ ပေါ်ရှိ တည်းခိုခန်း များတွင်ပါ အခန်း ကြ?? - Yangon Media Group
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ငပလီကမ်းခြေသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် စီစဉ်သူများအနေ ဖြင့် ငပလီကမ်းခြေရှိ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းများတွင် အခန်းလွတ်မရှိသလောက် ပြည့်နေ ပြီဖြစ်သောကြောင့် သံတွဲမြို့ရှိ တည်းခိုခန်းများတွင်ပါ အခန်းကြိုတင်မှာယူမှုများပြား လာကြောင်း ဒေသခံများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။
”ငွေဆောင်တို့၊ ချောင်းသာတို့မှာလဲ သင်္ကြန်တွင်းအတွက် လာရောက်တည်းခိုဖို့ Booking လုပ်ထားတာတွေရှိနေတယ်။ ငပလီမှာကတော့ ကမ်းခြေအနီးက ဟိုတယ်တွေက ဈေးမြင့်တာလဲပါမယ်ပေါ့။ အခုကျွန်တော်တို့ မြို့ပေါ်က ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းတွေမှာပါ အခန်းမှာတာတွေရှိတယ်။ ဒီလကုန်လောက် ဆို အခန်းမှာလို့မရနိုင်လောက်တော့ဘူး”ဟု သံတွဲမြို့မှ နွေရိပ်သာတည်းခိုရိပ်သာပိုင်ရှင် ဦးထွန်းကျော်က ပြောသည်။ လက်ရှိတွင် ကမ်းခြေအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ဟိုတယ်ခန်းများတွင် ကျပ် ၂၅ဝဝဝ မှ ၅ဝဝဝဝ အတွင်းရှိအခန်းများအတွက် အခန်းလွတ် မရှိသလောက်ပြည့်နေပြီး တစ်သိန်းအထက်ပေး ရသော အခန်းအနည်းငယ်သာ တွေ့ရှိရတော့ ကြောင်းနှင့် သံတွဲမြို့တွင် တည်းခိုမည်ဆိုပါ က ကျပ်တစ်သောင်းခွဲအောက်ဖြင့် ငှားရမ်း နိုင်မည့်အခန်းများရှိသောကြောင့် ဈေးနှုန်း သင့်တင့်နိုင်မည်ဟု ပြည်တွင်းခရီးသွားဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များက အကြံပြုပြောဆို ကြသည်။
သံတွဲမှ ငပလီလမ်းဆုံသို့ လေးမိုင်ခန့်သာ ကွာဝေးပြီး လိုင်းကား၊ သုံးဘီးယာဉ်များစီးပါက ကျပ် ၅ဝဝ သာရှိကြောင်းသိရသည်။ ”ကျွန်မတို့က ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေနဲ့မချိတ်တော့ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးသွား ကြမှာ။ ကမ်းခြေက ကြော်ငြာထားတဲ့အခန်း တွေကို ဈေးလှမ်းမေးပြီး Booking လုပ်တော့ ဈေးလဲကြီးတယ်၊ ရလဲမရတော့ဘူး။ လောလောဆယ် သံတွဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို အခန်းသန့်သန့်လေးနဲ့ ဈေးသင့်နိုင်မယ့် အခန်းသုံးခန်းလောက် ရှာပေးဖို့ အကူအညီတောင်းထားပါတယ်”ဟု ကမာရွတ်မြို့နယ်မှ မသင်း ဆွေအောင်က ပြောသည်။ ယခင်နှစ်များက သင်္ကြန်ကာလများတွင် ရေကစားသူများ၊ တရားစခန်းဝင်သူများသာများပြားသည့်အတွက် ခရီးစဉ် မရှိသလောက် နည်းပါးခဲ့သော်လည်း ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက ကမ်းခြေဟိုတယ်များသို့ ခရီးစဉ် ပို့ဆောင် ရခြင်းများရှိလာခဲ့သည်ဟု ခရီးသွားလုပ်ငန်း အသိုင်းအဝိုင်းမှသိရသည်။
PTL( Pyay )
‘သီချင်းတွေကို သေချာ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင် လုပ်နေလို့ တစ်ကိုယ်တော် ထပ်ထွက်မယ့် အချိန်က ကြာ
သင်္ကြန် ပြီးချိန်တွင် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် နန်းဖာလုံဈေး၌ အရောင်းအဝယ် ကောင်းမွန်နေပြီး မီးေ?
မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပျိုးပင်ငါးသောင်းကို ဇွန် ၁၁ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိ
သခင်အုန်းမြင့် နှစ်(၁ဝဝ)ပြည့် မွေးနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် တ